Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo dalbaday in xilka loo kordhiyo madaxweyne Siilaanyo | RBC Radio
Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo dalbaday in xilka loo kordhiyo madaxweyne Siilaanyo
Muqdisho (RBC Radio) Xisbiyadda mucaaradka ah ee UCID iyo Wadani ayaa markii ugu horreeysay soo jeediyay in waqtiga loo siyaasiyo madaxweynaha talada haya ee Axmed Siilaanyo,sida lugu sheegay war ka soo baxay.
Labada xisbi mucaarad ayaa qoraal u diray guddiga doorashadda Soomaaliland,iyagoo marka dalbanaya in waqtiga loo siyaadiyo madaxweynaha oo aysan dhici karin doorashada bisha March oo horay loogu ballamay.
Waxa ugu weyn ee ay u dalbadeen doorashada dib in loo dhigo ayaa ah abaaraha dadka iyo duunyada saameysay oo ka jirta Soomaaliland,waxaa ay sheegen inaysan suragal noqon karin iyadoo bulshada ay la daala-dhacayaan abaaro haddana inay codkooda dhibtaan.
Labada xisbi qoraalkooda luguma sheegin xilliga ay soo jeedinayaan doorashada madaxweynaha in la qabto,mana jirto wali wax war ah oo ka soo baxay xisbiga talada haya ee Kulmiye iyo guddiga doorashada.
Taarikhda waa markii ugu horreysay oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay dalbanayaan doorashada madaxweynaha waqtigeeda dib in loo dhigo.